ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတဲ့ ထိုင်း BL ဇာတ်လမ်းတွဲ “I Promised You The Moon” | News Bar Myanmar
ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတဲ့ ထိုင်း BL ဇာတ်လမ်းတွဲ “I Promised You The Moon”
ကြည့်ရှုသူတွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ထိုင်း BL series “I told sunset about you Part 2” ကတော့ ဇာတ်ရှိန်မြင့်တက်လို့နေပါတယ်။ အဓိကဇာတ်ကောင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Teh နဲ့ Oh-aew တို့က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖြစ် ကူးပြောင်းလာပြီဖြစ်ပြီး ဇာတ်အိမ်လည်းပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်လို့ မေလ ၂၇ ရက်မှာ စတင်ပြသခဲ့ပြီး အပိုင်း ၅ပိုင်းပဲပါဝင်မယ့် ဒီ BL ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ကြည့်ရှုသူတွေကြားမှာတော့ အင်မတန်ရေပန်းစားနေပါတော့တယ်။
တက္ကသိုလ်တက်ဖို့အတွက် ဖူးခက်ကနေ ဘန်ကောက်မြို့ကို ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ Teh နဲ့ Oh-aew တို့နှစ်ယောက်စလုံးက မိဘတွေရဲ့အထိန်းအကွပ်ကနေ လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ရင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာတော့ အပေါင်းအဖော်တွေပိုမိုများပြားလာတဲ့အပြင် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကလည်း ပြောင်းလဲခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့် Teh နဲ့ Oh-aew တို့ရဲ့ ပတ်သက်မှုကလည်း သူငယ်ချင်းအဆင့်မှ Relationship တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။
လေ့လာစရာတွေလည်းပိုမိုများပြားလာတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသား၊ ခံစားချက်တွေကကော အရင်အတိုင်း မပြောင်းလဲဘဲ ပေးထားသမျှကတိတွေကို တည်နိုင်ပါ့မလား? ပေါင်းသင်းစရာသူငယ်ချင်းတွေများလာသလို အလုပ်တွေများလာတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝမှာကော သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Relationship ကို အပေးအယူရှိစွာတည်ဆောက်နိုင်ပါ့မလား? ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးတွေကြုံလာဦးမလဲ? Happy Ending နဲ့ အဆုံးသတ်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေကတော့ ရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
“I Promised You The Moon” BL series ကတော့ အပိုင်း ၅ ပိုင်းတည်းပါဝင်မှာဖြစ်လို့ တော်တော်လေးတိုတောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပေမဲ့လည်း ကြည့်ရင်းနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်မှာသေချာပါတယ်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကြည့်ရင်းနဲ့တစိမ့်စိမ့်ခံစားရနိုင်မယ့် “I Promised You The Moon” Series ကိုတော့ အပတ်စဥ်, ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီဖြစ်လို့ ကြည့်ရှုလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Next တကယ့်အပြင်မှာလည်း မျက်နှာသေးသေးသွယ်သွယ်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Male Idol ၈ ဦး »
Previous « အဆိုးမြင်တဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့် တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ငိုခဲ့ရဖူးတဲ့ မင်းသမီးလေး Dilireba